Somalis For Jesus: Wajiyada Argagixisada Al-Qaacida ee Soomaaliya
Dambiile Muuse Carraale, Afhayeenka - Dambiile Xasan Daahir Aweys, Madaxa Xisbul Xisbul Islaam oo soo dhaweeyey Islaam xasuuqa reer Beledweyne.
Waxaan wada ogsoonahay in Argagixisada Alqaacida falalkan oo kale ka fulisay Afgaanistaan, Ciraaq, Algeria, Morocco, Yemen, Masar, Yurub, iyo USA. Kolkii Alqaacida looga adkaaday Afgaanistaan, Pakistaan iyo Ciraaq bey Soomaliya u soo dhuumatay si ay caqiidooda sumeysan ugu faafiyaan Soomalida, ka dibna saldhig ka dhigtaan oo ay ka abaabulaan falal argagixiso. Waxaa ayaan darro ah in dad sheeganaya Islaam oo Soomaali ah la maandooriyey, kuwaas oo ay horseed u yihiin ururada Alshabaab iyo Xizbul Islaam.
Xaqiiqadu waxey tahay in falalkan marnaba waafaqsaneyn Islaanimada iyo bani’aadanimada. Alshabaab iyo Xisbul Isalaam ujeedadooda waxey tahay in ay baabi’yaan muslimiinta Soomaaliyeed iyagoo ku soo dhuumanayo diinta Islaamka. Waxey ku amdacoodaan in ay yihiin mujaahidiin, haddana marka dagaal fool ka fool ah leyskaga horyimaado baqo dhabarka ah jeediyaan. Waxay sabab u ahaayeen soo gelintaanka ciidamada Itoobiyaanka, ka dib markey ku dhawaaqeen in ay jihaad ku qaadayaan Itoobiya.
Waana la ogyayahay baqadii ay dhigeen. Waxey ku wanaagsanyihiin ciqaabta shacabka dhibaateysan sida gacmo iyo lugo la jaro, qubuuro laga faago, haweenka oo loo diido in ay gadiidka raacaan, masaajidda oo marka salaadda laga soo baxo dadka lagu hortoogto, iwm. Intooda badan xataa looma akhrin kitaabka la yiraahdo “safiinatul Salaat”, aqoon kalena iskaba daa. Waana sababta ugu wacan in dambiilayaal ka soo cararay Afghanistan iyo Pakistan adeegsadaan shayaatiinta sheeganaya xasuuqa dad rayid ah sida Cali Dheeere iyo Xasan Yacquub.
Axad, Juun 28, 2009 dhacday B/Weyne bishan Juun, 18keedii waxey sababtay xasuuq dad badan oo rayid ah iyo howlwadeeno sare oo ka tirsan dowladda midnimo qaran uu ka madax ka yahay Shiikh Shariif Shiikh Axmed. Masuuliyiinta sare ee dowladda ee geeriyooday waxaa ka mid ahaa Cumar Xaashi Aadan, Wasiirkii Amniga Qaranka, iyo Safiir Cabdulkariim Faarax Laqanyho (Allaha u naxariisto). Waxaa falkaas xasuuqa sheegtay UrurkaUrurka Alshabaab oo xiriir la leh Ururka Alqaacida oo adduunka laga xarimay falal argagixiso awgeed.
Dambiile – Mukhtaar Roobow oo horay u qirtay dilkii macallimiinta – Hiiraan Education Project B/Weyne, 2008.
Dambiile Cali Maxamuud Raage - Al Madina Hoteel- xasuuq naxariis darro ah
(Cali dheere): “waxaan ku faraxsanahay howlaha ismiidaaminta ee laga fuliyey Hoteel Al Madina, Beledweyne, waana aan sii wadeynaa haddii…..
Qore: C/qaadir K. Dirie
Axad, Juun 28, 2009
Posted by Somalis For Jesus .SFJ at 3:56 AM